युरोकप फाइनलः इंग्ल्यान्ड भर्सेस इटाली, को बन्ला च्याम्पियन ? | सबै खेल
युरोकप फाइनलः इंग्ल्यान्ड भर्सेस इटाली, को बन्ला च्याम्पियन ?
२७ असार २०७८, आईतवार १२:३३
युारेकप उपाधिका लागि दुई ठूला शक्ति राष्ट्र इटाली र इंग्यान्ड भिड्दै छन्। १४औं संस्करणको युरोकप युरोपका विभिन्न ११ सहरमा आयोजना भयो । इटाली र इंग्ल्यान्डबीचको फाइनल लन्डनस्थित वेम्बली स्टेडियममा आज राति १२ः४५ बजे हुने छ।
बेम्वलीमा मैदान उत्रँदा दुवैको लक्ष्य उपाधिको खडेरी छोड्नु हुनेछ । इंग्ल्यान्ड ५५ वर्षदेखि उपाधिबिहीन छ भने इटाली ५३ वर्षपछि युरोकप र १५ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न चाहन्छ । इंग्ल्यान्डले अन्तिम पटक १९६६मा विश्वकप उपाधि जितेको थियो भने इटालीले १९६९मा युरोकप र सन् २००६ मा विश्वकप उपाधि जितेको थियो।
फुटबलको सबैभन्दा पुरानो शक्ति राष्ट्र इंग्ल्यान्डले पहिलो पटक युरोकप फाइनल खेल्न लागेको हो भने इटाली दाेस्रो उपाधिको खोजीमा छ। अहिले दुवै टिम उत्कृष्ट लयमा रहेकाले फाइलन खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा छ ।
प्रतियोगितामा दुवै टिम अपराजित छन्। पहिलो पटक फाइलन पुग्ने क्रममा इंग्ल्यान्डले १ गोल मात्र खाएको छ। यता, शतप्रतिशत जित निकालेको इटालीले फाइनल यात्राका क्रममा तीन गोल मात्र खाएको छ ।
युरोकप उपाधि भीडन्तमा उत्रने दुवै टिम बलिया छन्, त्यो उसको प्रदर्शनले प्रमाणित गरिसकेको छ। अझ इटाली कसैले रोक्नै नसक्ने टिमजस्तो देखिएको छ। रोबर्टो मान्सिनीको प्रशिक्षणमा रहेको इटाली ३३ खेल यता अपराजित छ । इटालीले हार्न बिर्सेको ३ वर्ष भइसकेको छ। त्यसमा उसले २७ जित र ६ बराबरी खेलेको छ।
यता इंग्ल्यान्डले पनि पछिल्ला १७ खेलमा १५ खेल जित्दै आफूलाई बलियो टिमका रुपमा उभ्याएको छ। र, उ १२ खेलयता अपराजित छ।
दुवै टिममा उत्कृष्ट खेलाडीको बाहुल्यता छ । इटालीसँग गोलकिपर जियानलुइजी डोनारुमादेखि जर्जियो चिनिली, लोरेन्जो इन्सिने, फेडेरिको किएसा, जर्जिन्होलगायत खेलाडी छन् भने इंग्ल्यान्डसँग ह्यारी केन, रहिम स्टर्लिङ, केल्भिन फिलिप्स, ज्याक ग्रेलिस, मेसन माउन्टलगायत खेलाडी छन्।
इटाली र इंग्ल्यान्डको फाइनल यात्रा
युरोकपको समूह चरणमा इटाली समूह एमा थियो । उसले समूह चणमा शतप्रतशित नतिजा निकाल्यो र समूह विजतोका रुपमा नकआउट चरणमा स्थान बनायो । यसक्रममा उसले टर्की र स्वीट्जरल्यान्डलाई समान ३–०ले हराउँदा अन्तिम खेलमा वेल्सलाई १–०ले हराएको थियो ।
उसले अन्तिम १६मा अस्ट्रियालाई एक्स्ट्रा टाइममा २–१ले पराजित गरेको थियो भने क्वार्टरफाइलनमा बेल्जियमविरुद्ध पनि उसको नतिजा उही रह्यो २–१ । सेमिफाइनलमा भने उसले स्पनेलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ले हरायो।
यता, इंग्ल्यान्डले पनि समूह डीका विजेताका रुपमा नकआउट चरण स्थान बनायो । उसले समूहमा २ जित र १ बराबरी खेल्यो । उसले क्रोएसिया र चेक रिपब्लिकलाई समान १–०ले हराउँदा स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेल्यो ।
अन्तिम १६मा इंग्ल्यान्डले जर्मनीको चुनौती २–०ले पन्छायो। क्वार्टरफाइनलमा युक्रेनाथि४–०को जित निकालेको इंग्ल्यान्डले सेमिफाइनलमा डेनमार्कलाई २–१ले हरायो ।
विगतका प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने इटाली बलियो देखिएको छ। यी दुई टिमबीच भएका २७ भीडन्तमा इटालीले ११ खेल जित्दा इंग्ल्यान्डले ८ खेलमात्र जितेको छ । यी दुईबीचका ८ खेल बराबरीमा सकिएको छ। यी दुई बीच भएका पछिल्ला ५ खेलमा भने दुवै समान १ खे जितेका छन् । ३ खेल भने बराबरीमा सकिएको छ।
ब्राजिललाई हराउँदै २८ वर्षपछि अर्जेन्टिना च्याम्पियन
नेमार र मेसी कोपाका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, मार्टिनेज उत्कृष्ट गोलकिपर